भोलिको तपाईको दिन कस्तो रहला ? हेर्नुहोस भोलिको राशिफल
मेष – चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ (Aries) तपाईको भोलि हराएको सामग्री भेटिन सक्ला। भोलि तपाई धेरै कुराहरुमा लाभ एबम सफलता पाउनु हुने दिन परेको छ। भोलि तपाईको परिवारबाट भरपुर साथ र सहयोग गर्नेछन भने भोलि तपाईमा कान्ति बढेर जाने दिन परेको छ। तपाईलाई भोलि सम्पूर्ण कार्य प्रति सन्तुष्टि मिल्ने देखिन्छ। भोलि पदोन्नतिको पनि योग रहेको छ।
बृष – इ, उ, ए, ओ, बा, बि, बु, बे, बो (Taurus) भोलि तपाईको नंया कार्य थालनीको लागि उचित मार्गदर्शन मिल्ने दिन परेको छ। भोलि तपाईको पहिला रोकिएका कार्यहरु सम्पन्न हुने योग परेको छ। व्यवसायको क्षेत्रमा नयाँ सम्भावनाहरु फेला पर्न सक्नेछन। भोलि आर्थिक लाभ सोचे भन्दा धेरै मिल्ने दिन रहेको छ।
मिथुन – का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, ह (Gemini) भोलि अनैतिक विचारहरू दिमागमा आउनेछ भने खर्च उच्च भएर जानेछ। भोलि तपाईको स्वास्थ्य प्रतिकूल रहने देखिन्छ। चिसोले तपाईलाई सताउन सक्ने हुँदा चिसोबाट टाढा बस्नु होला। भोलि मानसिक चिन्ता बढेर जानेछ भने भोलि रिसलाई काबुमा राख्नु पर्ने देखिन्छ। व्यापार बाधा पनि हुन सक्ने दिन परेको हुँदा सजक रहनु होला।
कर्कट – हि, हु, हे, हो, डा, डि, डु, डे, डो (Cancer) भोलि तपाईमा बिहानैबाट स्फुर्थी बढेर जाने दिन परेको छ। भोलि शारीरिक मात्र नभई मानसिक रुपमा पनि आफुलाई बलियो पाउनु हुने दिन परेको छ। भोलि तपाईको विचारमा छिटो परिवर्तन आउनाले भने कार्यमा बाधा पुर्याउन सक्ने देखिन्छ भने नंया कार्य थालनीको लागि भने परिवारमा सल्लाह गर्नु भएमा शुभ देखिन्छ।
सिंह – मा, मि, मु, मे, मो, टा, टि, टु, टे (Leo) ) भोलि तपाई हरेक कार्य दृढ मनोबल अनि आत्मविश्वासपूर्वक सम्पन्न गर्नु हुने देखिन्छ। भोलि यात्राको सम्भावना रहन साक्ला। भोलि तपाई नंया आभूषणका साथै आलंकारको जोहो गर्न सफल रहनु हुने देखिन्छ। भोलि तपाईको कार्यका कारण सहकर्मीहरुलाई फाइदा पुग्न सक्ने देखिन्छ।
कन्या – टो, प, पि, पु, ष, ण, ठ, पे, पो (Virgo) भोलि तपाई सामाजिक कार्यहरुमा सरिक रहनु हुने दिन परेको छ। भोलि घरपरिवारबाट साथ मिलनले कार्य सिद्धिमा सहयोग पुने देखिन्छ। भोलि तपाईको स्वास्थ्य मध्यम रहने देखिन्छ भने भोलि आखा सम्बन्धी समस्या देखि भने सावधान रहनु पर्ने देखिन्छ। भोलि तपाईको मनोवल भने उच्च रहने दिन परेको छ।
तुला – र, रि, रु, रे, रो, ता, ति, तु, ते (Libra) भोलि तपाईको तन-मनमा ऊर्जाको कमी रहनेछ। पारिवारिक वातावरण खराब हुन सक्छ,संयमित रहनु होला। भोलि कागजात सम्बन्धि कार्य बाट टाढा रहेकै उचित हुने दिन रहेको छ। भोलि तपाई भित्र पिडा बढेर जाने देखिन्छ। भोलि साथीहरू वा मित्रहरूबाट सुसमाचार प्राप्त हुने देखिन्छ।
बृश्चिक – तो, ना, नि, नु, ने, नो, या, यि, यु (Scorpio) आस मारेको नतिजा सकारात्मक हुनेछ। भोलि तपाईको मान-सम्मान बढेर जाने दिन रहेको छ। भोलि तपाईको बौद्धिकतालाई लिएर तपाईको प्रसंशा गर्नेगरुले तपाईलाई भरपुर सहयोग गर्ने देखिन्छ। भोलि प्रतिस्पर्धाहरू पराजित गर्न सफल रहनु हुने देखिन्छ। भोलि तपाईमा कान्तिको कुनै पनि कमि नरहला।
धनु – ये, यो, भ, भि, भु, ध, फा, ढ, भे (Sagittarius) भोलि तपाईको दिन खासै राम्रो हुने देखिन्न। भोलि तपाईले खानामा विशेष हेरविचार गर्नु पर्ने दिन परेको छ। भोलि पेट सम्बन्धी समस्याले सताउन सक्ला। भोलि तपाईलाई अनैतिक र अप्रमाणिक कामले विपत्तिमा पर्न सक्ने देखिन्छ। दिमागबाट नकारात्मक विचारहरू हटाएर जानु पर्ने दिन रहेको छ भने बोलीमा नियन्त्रण राख्नु होला।
मकर – भो, ज, जि, खि, खु, खे, खो, गा, गि (Capricorn) भोलि तपाई हरेक कार्य गर्नु भन्दा पहिला संयम रहनु पर्ने देखिन्छ। भोलि कुनै पनि अनिष्ठ नहोस भन्नको निमित्त तपाई एकदमै विचार पुर्वक निर्णय लिनु होला। भोलि परिवारमा पनि तपाईको कलह बढेर जाने देखिन्छ।
कुम्भ – गु, गे, गो, सा, सि, सु, से, सो, द (Aquarius) भोलि जागिर गर्नेहरुको लागि विशेष रहने देखिन्छ। भोलि तपाईको काम प्रतिको लगाभको सहकर्मिहरुबाट प्रसंशा मिल्ने देखिन्छ भने पदोन्नती पनि हुन सक्ला। भोलि पुराना लगानीबाट लाभ मिल्ने दिन परेको छ। भोलि तपाईको सम्पर्कमा रहेका व्याक्तिबाट तपाईलाई ठगि हुन सक्ने हुँदा सजक रहनु होला।
मीन – दि, दु, थ, झ, ञ, दे, दो, च, चि (Pisces)भोलि तपाई एकदमै सावधान रहनु पर्ने दिन रहेको छ।भोलि तपाईले शारीरिक र मानसिक विकारको सामना गर्नु पर्ने हुन सक्ला। भोलि तपाईको व्यापारमा मध्यान्न सम्म मंधिको सामना हुन सक्ला। भोलि तपाईको वाणीको गलत अर्थ लाग्ने हुँदा कम बोलेकै उचित रहला।। भोलि तपाईको आय भन्दा व्यय धेरै हुने देखिन्छ।
प्रकाशित : मङ्गलबार, फागुन ०१, २०७४२३:०६
आजको दिन तपाईको कस्तो रहला? हेर्नुहोस आजको राशिफल !!
आज रातिबाटै लागू हुनेगरी पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको मुल्य घट्यो ! हेर्नुहोस् मूल्य सहित !
घरपरिवारमा अनैतिक सम्बन्ध खुल्ने डरमा बुहारीले गरिन छिमेकी युवकको हत्या !
पैसा कमाउन कुवेत पुगेकी मनमाया बलात्कारीको नासो लिएर फर्किन्…
१४ मिनेट अगाडि रासस
दक्षिणकालीमा श्रीमान-श्रीमतीनै मृत भेटिए, छोरा र छोरीसमेत अशक्त अवस्थामा फेला !
चारदिनदेखि २ जना बालक बेपत्ता , खोजिकार्यमा सहयोग पुर्याउन परिवारको अपिल !
३५ मिनेट अगाडि PS
स्थानीयले प्रहरीचौकी तोडफोड गरेपछि हवाइफायर ! स्थिति तनावग्रस्त !
संघीयता महंगो भयो , स्थानीय तहमा अधिकार बढाएर प्रदेश सरकार खारेज गर्नुपर्छः चित्रबहादुर केसी
२२ घण्टा अगाडि बिगुल
आज वर्षकै सबै भन्दा चिसो दिन ! ह्वातै देशभर चिसो बढ्नुको कारण यस्तो रहेछ !
जनताले थाहा नपाउन्जेल घरभाडावापतको रकममा रैला, जनताले थाहा पाएपछि चोखिन विज्ञप्ति !